Ngaba kuyacetyiswa ukuba abantwana bahambe benganxibanga ezinyaweni? | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Ingcebiso koomama
Bekusoloko kukho iindawo eziphikisanayo ngokubhekisele ekubeni kulungile ukuba abantwana bahambe benganxibanga zihlangu okanye ngcono ngezihlangu. Uninzi lwabazali luthintela abantwana babo ukuba bangahambisani neembadada ekhaya esoyikela ukuba baya kugqibela bengenwe yingqele.
Le yintsomi eyinyani kuba intsholongwane ingena emzimbeni ngokuphefumla. Ngokwahlukileyo koko, iingcali ngalo mbandela zicebisa ukuba umntwana anganxibanga zihlangu ekhaya kuba ngale ndlela iinyawo zikhula ngcono kakhulu.
1 Ngaba abantwana kufuneka banxibe izihlangu?
2 Zithini izibonelelo zokuhamba unganxibanga zihlangu ebantwaneni
3 Khathalela ukuba umntwana uhamba engenazihlangu
Ngaba abantwana kufuneka banxibe izihlangu?
Iingcali zicebisa ngokuchasene nokubekwa kweentsana kwezihlangu ngeenyanga zokuqala ubudala. Xa kuziwa ekukhuseleni iinyawo zomntwana wakho omncinci kumaqondo obushushu asezantsi okanye ukothuka, vele ubeke iikawusi kubo. Khumbula ukuba ukukhasa sisitshixo kuphuhliso olulungileyo lwenkqubo yengqondo yomntwana, kungoko akufuneki banxibe izihlangu ezinyaweni.
Nje ukuba umntwana aqale ukuhamba, abazali kufuneka bakhethe ukunxiba uhlobo lwezihlangu oluguquguqukayo noluphefumla ngokugqibeleleyo. Ukusuka kwiminyaka emi-4 okanye emi-5 ubudala, izihlangu ezisetyenzisiweyo kufuneka ziqine kwaye zomelele ukukhusela iinyawo zomntwana.
Zithini izibonelelo zokuhamba unganxibanga zihlangu ebantwaneni
Ukuhamba ngaphandle kweembadada ngaphandle kwezihlangu kuya kuvumela ukwakheka okungcono kweenyawo zeenyawo, ukubathintela ekubandezelekeni kwinto eyaziwa ngokuba ziinyawo ezicabaleleyo.
Ngexesha lokuqala kobomi, eyena usana luya kuba novakalelo olukhulu kwiinyawo kunasezandlenis. Ngokuhamba unganxibanga zihlangu, iinyawo zakho zikunceda ukuba ujonge umhlaba okujikelezileyo. Ukongeza, ukuhamba ngeembadada kungavumeli okanye kube negalelo kuphuhliso olungcono lwazo zonke izivamvo zencinci.
Xa uhamba unganxibanga zihlangu, omncinci uya kuziva iintlobo ezahlukeneyo zokuthambeka ngeenyawo zabo. Oku kuvumela umntwana ukuba akhule ngeendlela ezahlukeneyo ezibizwa ngokuba yi-kinesthetic, ezinceda ukuphucula indawo yemisipha eyahlukeneyo Ukomeleza amalungu omzimba.
Khathalela ukuba umntwana uhamba engenazihlangu
Kuyacetyiswa ukuba uhambe unganazi zihlangu, Oko akuthethi ukuba umntwana kufuneka ngalo lonke ixesha angabikho naluphi na uhlobo lwezihlangu. Kwimeko yokuya echibini, kubalulekile ukuba omncinci anxibe ii-slippers, kuba yindawo apho usulelo oluqhelekileyo luhlala lusulelekile.
Kwimeko apho uhlobo oluthile lokulimala lunokwenziwa ngelixa uhamba ngaphandle kwezihlangu, kubalulekile ukwazi ukuba wenzeni. Kwiimeko ezininzi kunyanzelekile ukuba ufumane isitofu sokugonya se-tetanus Ukuthintela usulelo ukuba lubi kwaye kubangele iingxaki ezinzulu nezibi.
Abazali bafanele bazi ngawo onke amaxesha apho umntwana angaya enganxibanga ngokupheleleyo ezinyaweni kwaye xa kufuneka enxibe izihlangu. Awunakho ukuvumela umntwana ukuba ahlale engenazihlangu kwaye aqhele ukuhamba ngeembadada.
Ngamafutshane, Oogqirha kunye neengcali bacebisa ukuba abantwana bahambe benganxibanga zihlangu kangangexesha elithile ngosuku. Inyani yokuziva umhlaba kunye nokuhamba kuwo ngaphandle kolunye uhlobo lwezihlangu, iyabanceda ukuba babe nophuhliso olukhulu lwenkqubo yabo yengqondo phakathi kwezinye izibonelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Ingcebiso koomama » Ngaba kuyacetyiswa ukuba abantwana bahambe benganxibanga ezinyaweni?
Izimvo zokuphinda usebenzise iingqayi zeglasi